Add-ons – Tagged "USD" – ICT.com.mm
Epson Ink Bottle 008 (Yellow)K42,000
Epson Ink Bottle 008 (Magenta)K42,000
Epson Ink Bottle 008 (Cyan)K42,000
Epson Ink Bottle 008 (Black)K53,000
Fujifilm CT203020 Toner Cartridge Black (9K) Akebono for 2022K84,317
Epson Ink Bottle 008 (Yellow)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Code: 008 Complitable Printers: L6570, L6580, L15150, L15160 Colour: Yellow Capacity: 70ml Epson’s new EcoTank pigment ink, DURABrite ET INK, delivers prints that are sharp, clear and water-resistant, even...
Epson Ink Bottle 008 (Magenta)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Code: 008 Complitable Printers: L6570, L6580, L15150, L15160 Colour: Magenta Capacity: 70ml Epson’s new EcoTank pigment ink, DURABrite ET INK, delivers prints that are sharp, clear and water-resistant,...
Epson Ink Bottle 008 (Cyan)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Code: 008 Complitable Printers: L6570, L6580, L15150, L15160 Colour: Cyan Capacity: 70ml Epson’s new EcoTank pigment ink, DURABrite ET INK, delivers prints that are sharp, clear and water-resistant, even...
Epson Ink Bottle 008 (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Code: 008 Complitable Printers: L6570, L6580, L15150, L15160 Colour: Black Capacity: 127ml Epson’s new EcoTank pigment ink, DURABrite ET INK, delivers prints that are sharp, clear and water-resistant,...
Fujifilm CT203020 Toner Cartridge Black (9K) Akebono for 2022
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: CT203020 Type: Toner Cartridge Print Yield: Around 9000 Pages Compatible Products: Akebono for 2022 Color: Black Item Code: AC1210023
Fujifilm CT203021 Toner Cartridge Cyan (3K) Akebono for 2022
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: CT203021 Type: Toner Cartridge Print Yield: Around 3000 Pages Compatible Products: Akebono for 2022 Color: Cyan Item Code: AC1210024
Fujifilm CT203022 Toner Cartridge Magenta (3K) Akebono for 2022
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: CT203022 Type: Toner Cartridge Print Yield: Around 3000 Pages Compatible Products: Akebono for 2022 Color: Magenta Item Code: AC1210025
Fujifilm CWAA0869 Waste Toner (15K) Akebono for 2022/ 2020/2021
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: CWAA0869 Page Yield: 15000 Approx Item Code: AC1210027
Fujifilm CT351053 Drum Cartridge (68K) Akebono for 2022
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: CT351053 The amount of use on A4 paper is about 68,000 sheets. Used for the DocuCentre SC2020 model. Genuine. Item Code: AC1210022
Fujifilm TCT350851 Long Life Drum Cartridge
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ApeosPort-V C3376R,C5576R Model Number: TCT350851 100,000 Pages (estimated page yield provided based on 5% coverage or at ISO 2471 pattern/normal) Item Code: AC1210133
Fujifilm Toner Cartridge 3.0K For DocuPrint P285dw/M285z (CT202877)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ High Capacity Toner Cartridge (3K) Print Capacity: 3,000 pages based on 5% Coverage Applicable Models: DocuPrint P235db/P235d/P275dw/P285dw/M285z Item Code: AC1210055
Fujifilm CT202248 Ibuki for 2020 Toner Cartridge (Cyan)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Page yield of up to 3,000 pages Compatible with the following Fuji Xerox printing device(s): DocuCentre SC2020 To ensure you are getting the best results from your...
Fujifilm CT202248 Ibuki for 2020 Toner Cartridge (Magenta)
Fujifilm CT202249 Ibuki for 2020 Toner Cartridge (Yellow)
KONICA MINOLTA TNP80Y Tonar Catridge Set (Yellow)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Type: Toner Origin: Original Color: Magenta Technology: Laser Number of pages (5% coverage): 13000
KONICA MINOLTA TNP80M Tonar Catridge Set (Magenta)
KONICA MINOLTA TNP80C Tonar Catridge Set (Cyan)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Type: Toner Origin: Original Color: Cyan Technology: Laser Number of pages (5% coverage): 13000
KONICA MINOLTA TNP80K Tonar Catridge Set (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Type: Toner Origin: Original Color: Black Technology: Laser Number of pages (5% coverage): 13000
Fuji Xerox CT202137 Toner Cartridge-3
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Item Code: AC1210020 Black Toner Cartridge Page yields 5% of A4 1,000 pages Toner Cartridge (1K): For (DPP11w/P115b/M115z/M115w/M115b)
Fuji Xerox DC-V C2263 / C2265 Black Toner Cartridge
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Fuji Xerox Color: Black Up To 15.000 Page Yield, Based On 5% Coverage Use For: DocuPrint C2263 / C2265 printers
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Fuji Xerox Model: CT351055 DocuPrint: M225dw/M225z/M265z/P225d/P225db/P265dw